Oceanhorn inowanikwa paApp Store pane chakakosha dhisikaundi | IPhone nhau
Oceanhorn inowanikwa paApp Store pane chakakosha mutengo
Oceanhorn ndomumwe wemitambo iyo vashandisi vazhinji vakagara vachifunga seZelda yeIOS, mukushayikwa kwaNintendo achifunga kuvhura mutambo uyu weiyo ecosystem, chimwe chinhu chisingaratidzike kunge chiri kukurumidza. OceanHorn ine mutengo wenguva dzose wee8,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuiwana muApp Store ye4,99 euros chete., kuderedzwa kweinosvika 50%. Oceanhorn inotiratidza nyaya inoyevedza ine inonakidza 3D mifananidzo ine mutambo wehunyanzvi uko kwatinozowana chiito uye kushanya. Chimwe chinhu chinomira mumutambo uyu ruzha, rwiyo rwakagadzirwa nevakanakisa vemavhidhiyo emitambo munyika seNobo Uematsu (Final Fantasy) naKenji Ito (Seiken Densetsu).
Munguva yekuvandudzwa kweOceanhorn, isu tichafanirwa ongorora zviwi zvemakungwa asina kuongororwa, nyika izere nenjodzi, mapuzzle uye zvakavanzika zvakawanda. Tichafanirwa kudzidza kushandisa mashiripiti, kutarisana nezvikara, kutsvaga hupfumi hwekare kuti tikwanise kupedza basa redu zvinobudirira. Uchenjeri hwedu uye hunyanzvi zvichaiswa pamuedzo kuti zvibudise zvakavanzika zveumambo hwekare hweArcadia uye chikara chegungwa chinonzi Oceanhorn.
Mumhanzi naNobuo Uematsu anozivikanwa uye Kenji Ito, mimhanzi inotibvumidza kunyudza mumutambo.
Anopfuura maawa gumi emutambo wekutamba uchitevera nyaya inonakidza
Nyanzvi hunyanzvi hwemunondo uye zvemashiripiti.
Tarisa zvinhu zvekare kuti zvikubatsire pane chako chishuwo.
Game Center kubudirira, kugona kukwikwidza neshamwari dzedu.
Chaizvoizvo kubata kwekubata
Inoenderana neICloud, iyo inotibvumidza kuyananisa kufambira mberi kwedu pane zvese zvishandiso patino mutambo uyu wakaiswa.
Kugarisana neiyo iOS 7 mutyairi, yakanakira avo vese vashandisi vanoramba vachishandisa MFI zvinodzora kuti vadzivirirane nekiriniki kunakidzwa nemutambo uyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Oceanhorn inowanikwa paApp Store pane chakakosha mutengo
"Shandisa AirPods" gwara rave kuwanikwa kune vatsva vatengi